Samachar Batika || News from Nepal » माछा खाँदा स्वास्थ्यलाई यति धेरै फाईदा हुन्छ ( एकचोटी अबस्य पढ्नुहोस )
माछा खाँदा स्वास्थ्यलाई यति धेरै फाईदा हुन्छ ( एकचोटी अबस्य पढ्नुहोस )
यदि तपाईं मांशाहारी हुनुहुन्छ भने सकेसम्म माछा र माछाबाट बनेका खानेकुरा बढी खाने गर्नुस्, जसले तपाईंको मस्तिष्कलाई सधैं ताजा र तेज राख्न मद्दत गर्दछ ।
संसारमा सबैभन्दा कम माछा खाने देश सम्भवत: नेपाल नै होला, किनकि नेपालमा समुद्र छैन । अन्य देशमा हप्तामा पाँच छाक माछा खायो भने एक–दुई छाक अन्य मां’स खाने चलन छ तर नेपालमा महिनामा एक या दुई छाक मात्र माछा खाने चलन रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा खसी, कुखुरा, भैसी या राँगा र बंगुरको मासु बढी प्रचलित छ जुन स्वस्थ्यको लागि त्यति उपयोगी मानिंदैन ।किनकि त्यस्ता रातो मासुले शरीरमा कुनै न कुनै वि’कार गरिरहेको हुन्छ । रातो मासु पचाउनका लागि झन्डै ३२ देखि ३६ घन्टा लाग्ने गर्छ तर माछा पचाउन मात्रा २ देखि ३ घन्टा मात्र लाग्छ यो हिसाबले पनि माछा खानु अति स्वस्थ्यकर मानिन्छ ।
माछा भन्दैमा हामी सीमितलाई बुझ्छौ तर विश्वमा हजारभन्दा बढी माछाका किसिम पाइन्छ जुनको आआफ्नै रङ, विशेषता हुन्छ । टुना माछामा पाइने तत्व तिलापिया माछामा पाइँदैन त्यस्तै झिंगे माछामा पाइने तत्व सालमन माछामा पाइन्न ।
माछा खानुको फाइदा के के हुन् त ? जानिराख्नुपर्ने कुराहरु !
–माछा या माछाको फूल खानाले छालासम्बन्धी सम्पूर्ण रोग निगाहा हुन्छ र डन्डीफोर आउने ड’र हुन्न।
–कलेजोमा लाग्ने विभिन्न रोगबाट बचाउन पनि सहयोग पुर्यादएको हुन्छ।
प्रकाशित मिति २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०६:१५